सामाजिक सञ्जालमा #10YearChallenge बच्न जरुरी छ ? – Himalitimes
सामाजिक सञ्जालमा #10YearChallenge बच्न जरुरी छ ?
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा यतिवेला #10YearChallenge मा मानिसहरु कसरी आकर्षित भइरहेका छन् । यि सामाजिक सञ्जालमा तपाईं अथवा तवाईंले चिनेका मानिसहरुले यो चुनौतीमा बहकिएर आफ्नो अहिलेको र १० अथवा २० वर्ष पुरानो तस्बिर एक साथ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन ।
सामान्यतया यो नयाँ ट्रेण्ड कुनै नोक्सान अथवा क्षति पुर्याउने जस्तो देखिदैछ । तर सामाजिक सञ्जलामा भाइरल हुने अथवा हुन सक्ने हरेक कुराका पछाडि कुनै न कुनै कारण अवश्य पनि हुन्छ । के यो कसैको व्यापारको हिस्सा हो ? अथवा डाटा बैङ्क तयार गर्न जानीबुझी नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुबाट उनीहरुका नयाँ र पुराना तस्बिरहरु पोष्ट गराइदै छ ? के यसका पछाडि कुनै षडयन्त्र छ ? के हामीले यो तथाकथित चुनौतीबाट टाढै बस्नु उचित छ ?
सामाजिक सञ्जालको भनाइ छ, ‘‘यो युजर जनरेटेड मीम हो, जो आफै भाइरल भएको हो । फेसबुकले यो ट्रेण्ड सुरु गरेको होइन ।’ फेसबुकले अहिले चलिरहेको १० वर्षिय चुनौतीका बारेमा आफ्नो स्पष्टोक्ति दिइसकेको छ । तर यदि हामीले #10YearChallenge को बारेमा केही कुरा नगरे पनि विगतमा यस्ता कयौं सामाजिक सञ्जालमा खेल र मीम देखिएका थिए । जो सोशल इन्जिनियरिङका हिस्सा थिए र उनीहरुको उदेश्य भनेको मात्र डाटा संकलन गरेर एकत्रित मात्रै गर्नुथियो ।
जानकारहरुले यो चुनौती टाइम पास गर्ने र आनन्द लिने विषय नभएको र यसबाट बच्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
के यो चुनौतीबाट कुनै नोक्सान हुन सक्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा साइबर ल एक्सपर्ट पवन दुग्गलले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘‘अवश्य पनि, साइबर अपराधी यसको दुरुपयोग कर सकतगर्न सकछन् ।’’
१० वर्ष पुरानो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दा के असर पर्न सक्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘‘अहिलेसम्म यस प्रकारको दुरुपयोगको कुनै प्रमण सार्वजनिक त भएको छैन् । तर एउटा कुरा सम्झिन जरुरी छ कि जुन तस्बिर अहिलेसम्म उपलब्ध थिएन, त्यो तस्बिरलाई मानिसहरु स्वयम् उपलब्ध गराइरहेका छन् ।’’
अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा नभएका तस्बिरहरु पोष्ट हुँदा मार्फिङ हुन सक्ने र ती तस्बिरहरु टारगेट गर्न प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । फेशियल रिक्गिनशन एल्गोरिथमबाट यो चुनौती कसरी जोडिएको छ भन्ने प्रश्नमा दुग्गल भन्छन्, ‘‘विश्वभरी फेशियल रिक्गिशन एल्गोरिथममाथि थुप्रै कामहरु भइरहेका छन् । यसबाट सजिलैसँग १० वर्षमा अनुहारमा कसरी परिवर्तन आइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ । ती तस्बिरहरुको मद्दतले फेशियल रिक्गिनशनमाथि काम गरिरहेका एजेन्सीहरु आफ्नो सफ्टवेरलाई अझै बढी मजबुत र बढी इन्टेलिजेन्ट बनाउन सक्छन् ।’(BBC HINDI)
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ ९, २०७५ 6:43:31 AM |
Prevछोरी बेचेको आरोपमा बाबुसहित तीनजना पक्राउ
Nextसुन कसरी तामा भयो ? प्रहरीले थाल्यो छानबिन